Kwiminyaka yakutshanje, ngokuphuhliswa kwetekhnoloji yokulima yefungi enokutyiwa, ukwanda okuqhubekayo kwendawo yokutyala kunye nenani elinyukayo leentlobo zokutyala, amakhowa abe sisityalo esibalulekileyo semveliso kwimveliso yezolimo. Kwindawo ekhulayo yamakhowa, inkunkuma eninzi yenziwa minyaka le. Inkqubo yokuvelisa ibonisa ukuba i-100kg yezinto zokuzalisa inokuvuna i-100kg yamakhowa amatsha kwaye ifumane i-60kg yeInkunkuma yentsalela yamakhowa ngaxeshanye. Inkunkuma ayingcolisi imeko-bume kuphela, kodwa ikwabangela nenkunkuma enkulu yezixhobo. Kodwa ukusebenzisa inkunkuma eseleyo yamakhowa ukwenza isichumiso se-bio-organic kuyathandwa, okungagcini nje ngokuqonda ukusetyenziswa kwenkunkuma, kodwa kuphucula umhlaba ngokufakaIntsalela yamakhowa isichumiso se-bio-organic.
Iintsalela zamakhowa zityebile kwizakhamzimba eziyimfuneko kwizithole nokukhula kwemifuno neziqhamo. Emva kokuvubela, zenziwe ngezichumisi ze-bio-organic, ezineziphumo ezilungileyo ekutyalweni. Ke, intsalela yamakhowa iyiguqula njani inkunkuma ibe bubutyebi?
Sebenzisa ukuvundiswa kwentsalela yamakhowa ukwenza inyathelo lendalo ye-bio-organic:
1. Umyinge wesisindo: 1kg ye-arhente ye-microbial inokuvumba i-200kg yentsalela yamakhowa. Intsalela yamakhowa enkunkuma kufuneka ityunyuzwe kuqala kwaye emva koko ibile. Iiarhente ezincinci zentsholongwane kunye nentsalela yamakhowa zixutywe kakuhle kwaye zafakwa. Ukuze ufezekise umlinganiselo ofanelekileyo we-C / N, ezinye i-urea, umgquba wenkukhu, intsalela yesesame okanye ezinye izinto ezincedisayo zinokongezwa ngokufanelekileyo.
2. Ukulawulwa kokufuma: emva kokuxuba intsalela yamakhowa kunye nezinto ezincedisayo ngokulinganayo, tshiza amanzi kwisitaki ngokulinganayo ngempompo yamanzi kwaye uyijike rhoqo de ukufuma kwezinto eziluhlaza kube malunga ne-50%. Ukufuma okuphantsi kuyakucothisa ukuvundiswa, ukufuma okuphezulu kuya kukhokelela ekunciphiseni komoya.
3. Ukujika komgquba: Ukuguqula isitaki rhoqo. I-Microorganism inokuphinda ithi cwaka ize yehlise imo yendalo phantsi kweemeko zamanzi ezifanelekileyo kunye neoksijini, oko ke kuvelisa ubushushu obuphezulu, kubulala iintsholongwane ze-pathogenic kunye nembewu yokhula, nokwenza ukuba izinto eziphilayo zifikelele kwisimo esizinzileyo.
4.Ukulawulwa kobushushu: elonaqondo lobushushu liqala nge-15 ℃, ukubila kunokuba malunga neveki enye. Ebusika iqondo lobushushu liphantsi kwaye ixesha lokuvumba lide.
5. Ukugqitywa kokuvundiswa: jonga umbala wesitaki se-mushroom, kukhanya tyheli ngaphambi kokuvumba, kwaye kumnyama ngombala emva kokuvumba, kwaye isitaki sinencasa entsha yamakhowa ngaphambi kokuvumba. Ukuqhutywa kombane (EC) kunokusetyenziselwa ukugweba, ngokubanzi i-EC isezantsi ngaphambi kokubila, kwaye inyuke kancinci ngexeshaInkqubo yokuvumba.
Sebenzisa intsalela yamakhowa emva kokuvumba ukuvavanya indawo ezikhulayo zeklabishi yaseTshayina, iziphumo zibonise ukuba isichumiso esenziwe ngezinto ezenziwe ngentsalela yamakhowa kuluncedo ekuphuculeni ikhaphetshu yaseTshayina, efana negqabi lekhaphetshu laseTshayina, ubude bepetiole kunye nobubanzi begqabi buphezulu kuneqhelekileyo, kwaye imveliso yeklabishi yaseTshayina inyuke nge-11.2%, umxholo weklorophyll unyuke nge-9.3%, umxholo weswekile enyibilikayo unyuke nge-3.9%, umgangatho wezondlo uphuculwe.
Zeziphi izinto ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuseka isityalo sesichumiso se-bio-organic?
Ukwakha Isityalo sesichumiso sezinto eziphilayo Ifuna ukuthathelwa ingqalelo ngokubanzi kwezixhobo zalapha ekhaya, amandla emarike kunye nerediyasi yokugubungela, kwaye iziphumo zonyaka ngokubanzi ukusuka kwi-40,000 ukuya kwi-300,000 yeetoni. Iziphumo zonyaka zeetoni ezili-10 000 ukuya kuma-40,000 zilungele izityalo ezitsha ezitsha, iitoni ezingama-50 000 ukuya kuma-80,000 zezityalo eziphakathi neetoni ezingama-90,000 ukuya kwi-150,000 kwizityalo ezikhulu. Le migaqo ilandelayo kufuneka ilandelwe: iimpawu zoovimba, iimeko zomhlaba, izityalo eziphambili, ubume bezityalo, iimeko zesiza, njl.
Njani ngendleko zokuseka isityalo se-bio-organic?
Umgangatho wokuveliswa kwesichumiso esincinci Utyalo-mali lincinci, kuba izinto zomthengi ngamnye eziluhlaza kunye neemfuno ezithile zenkqubo yokuvelisa kunye nezixhobo zahlukile, ke iindleko ezithile azizukubonelelwa apha.
Kugqityiwe Intsalela yamakhowa intsalela yemveliso yesichumiso somgquba Iqulathe uthotho lweenkqubo zemveliso kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokwenza imveliso, iindleko ezithile okanye ukuxhomekeka kwimeko eyiyo, kunye nokusetyenziswa kweendleko zomhlaba, iindleko zokwakha umasifundisane kunye neendleko zokuthengisa kunye nolawulo nazo kufuneka ziqwalaselwe ngaxeshanye . Logama inkqubo kunye nezixhobo zihambelana ngokufanelekileyo kwaye kukhethwe abathengisi abafanelekileyo, kubekwa isiseko esiqinileyo semveliso engaphezulu kunye neenzuzo.